PetrPikora.com bụ onye ọrụ nyocha nke HSTS technology (HTTP Strict Transport Transport). Nchekwa Ụgbọ njem na-egbochi HTTP (HSTS) ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na anyị na-eme ka anyị na-enyere anyị aka ka anyị na-enyere anyị aka ka anyị na-enyere anyị aka ka anyị na-enyere anyị aka na-enyere anyị aka ịbanye na ya (tzv. kuki na kuki). Ngwá ọrụ nke ọrụ, na ihe nkesa na-echebe gị na ndị na-ezigara gị HTTPS ngwa ngwa na-ezigara gị na HTTPS ngwa ngwa na-ezigara na HTTP profaịlụ. HSTS chepụtara RFC 6797. HSTS ngwa ngwa webový na-arụ ọrụ na-ezigara HTTP ọrụ Ụgbọ njem-Nchebe, Ị nwere ike na-eche na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-echekwa ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-echekwa ihe na-emetụta gị nhọrọ. HSTS bụ ndị ọkachamara na-eme ka ndị ọzọ na-emepụta ihe (odposlechy) a na-eme ka ndị ọzọ. Díky HSTS usoro na-arụ ọrụ, na-eme ka ndị mmadụ na-na-na-adịbeghị anya, ma ọ bụrụ na ha na-eme ihe, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka a na-eme ihe. Staráme se o vaši bezpečnost!
N'akụkụ a, ị ga-ekwupụta URL nke saịtị gị, yana aha ụlọ ọrụ, nzukọ ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ na saịtị yana ozi ziri ezi.
Ọnụ ọgụgụ ozi ị ga-achọ ime ga-adịgasị iche dabere na iwu na iwu obodo Europe ma ọ bụ obodo. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-adị mkpa ịnye adreesị nkịtị, nọmba njirimara ụlọ ọrụ.
Nkọwa okwu: Adreesị weebụ anyị bụ: https://petrpikora.com.
Ihe anyị na-anakọta na ihe mere anyị ji anakọta ha
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Mohou ka být například data transakcí - informace o nákupu; kuki kuki; a na-emeghe - ozi ọma na ị nwere ike ịbanye na ya.
I kwesịkwara ịnye ozi banyere nchịkọta na nchekwa nke data onwe onye dị nro, dị ka data ahụike.
Na mgbakwunye na ịkọwa ozi nkeonwe ị na-anakọta, ịkwesịrị igosi ihe mere ị na-achịkọta ha. Nkọwa ndị a aghaghị iburu n'uche ma ihe ndabere iwu maka nchịkọta na ijigide data nkeonwe ma ọ bụ nkwenye na-arụ ọrụ nke onye ọrụ ahụ.
Anaghi emeputa ozi nkeonwe naanị site n'inwe mkparita uka gi. A na-emepụta data onwe onye site na nhazi ọrụ dịka ụdị kọntaktị, ihe, kuki, nchịkọta, na data nke ndị ọzọ ejiri.
Site na ndabara, WordPress anaghị anakọta ozi ọ bụla a na-achọpụta banyere ndị ọbịa ma na-anakọta data gosipụtara na "adreesị" ha maka ndị ọrụ edebara aha. Otú ọ dị, ụfọdụ nkwụnye nkwụnye gị nwere ike ịnakọta ozi nkeonwe. N'okpuru ị ga-agbakwunye ozi kwekọrọ na nke a.
Na mpaghara nke a, ị ga-egosi ihe ederede site na nkwupụta. N'okpuru ebe a anyị na-enye ozi gbasara ihe nkenke data data na-achịkọta.
Nkọwa okwu: Mgbe ndị ọbịa na-ekwupụta na saịtị a, data gosipụtara na ụdị nkwupụta, adreesị IP nke onye ọbịa ahụ, na nchịkọta onye ọrụ onye na-akọwapụta ihe nchọgharị ahụ na-anakọta, na-enyere aka ịchọpụta spam.
Enwere ike ịnweta gravatar na ederede aha gị nke adreesị ozi-e gị (nke a makwaara dị ka hash) iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị na-eji ọrụ a. Amụma Nzuzo nke dị ebe a: https://automattic.com/privacy/. Ozugbo a kwadoro okwu gị, a na-ahụ onyinyo foto gị n'ihu ọha na gburugburu okwu gị.
Na mpaghara nke a, ị ga-ezipụta ihe data nwere ike bipụtara ndị ọrụ nwere ike bulite faịlụ mgbasa ozi. Ihe niile ebudatara faịlụ na-adịkarị n'ihu ọha.
Nkọwa okwu: Ọ bụrụ na ị na-ebudata ihe oyiyi na saịtị a, ị kwesịrị izere ịdebe ihe oyiyi na data ebe a na-etinye (EXIF GPS). Ndị ọbịa na saịtị nwere ike ibudata ma lelee ozi ebe ọ bụla site na ihe oyiyi na weebụ.
WordPress anaghị agụnye ụdị kọntaktị site na ndabara. Ọ bụrụ na ị na-eji nkwụnye kọntaktị, jiri mpaghara nke a gosipụta ihe ndekọ nkeonwe onwe gị mgbe e zigara otu kọntaktị na oge ole ị na-echekwa ozi ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike igosi na ị na-echekwa ozi achọtara site na kọntaktị maka oge ụfọdụ maka ebumnuche ọrụ ndị ahịa, ma ị gaghị eji ozi a maka ebumnuche ahịa.
Na mpaghara nke a, ị ga-egosipụta nke kuki saịtị gị na-eji, tinyere ndị na-emepụta plugins gị, mgbasa ozi mmekọrịta, na nchịkọta. N'okpuru ebe a bụ kuki ndị WordPress site na ndabara.
Nkọwa okwu: Ọ bụrụ na ị gbakwunye okwu na saịtị anyị, ị nwere ike ikwe ka anyị chekwaa aha gị, adreesị ozi-e, yana weebụsaịtị gị na kuki. N'ụzọ dị otú a, anyị na-agbalị imekwu nkasi obi gị mgbe ị deere nkọwa ọhụrụ, yabụ ị gaghị enwe ike ịjupụta ya ọzọ. Kuki ndị a ga-adịru otu afọ.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ma na-abanye na saịtị a, debe kuki nwa oge iji nyochaa na ihe nchọgharị gị na-anata kuki. Kuki a enweghi data ọ bụla n'onwe ya, a ga-ehichapụkwa ya mgbe emechiri ihe nchọgharị ahụ.
Mgbe ịbanye, anyị na-edozi ọtụtụ kuki iji chekwaa ozi nbanye gị na iji gosipụta ihuenyo. Kuki a kọnyere nwere ụbọchị abụọ nke ndụ, na kuki ngosi kuki n'otu afọ. Ọ bụrụ na ị kwadoro nhọrọ "Cheta m," nbanye gị ga-ewe izu abụọ. Ọ bụrụ na ị banye na akaụntụ gị, a ga-ewepụ kuki nbanye.
Ọ bụrụ na ị dezie ma ọ bụ bipụta otu isiokwu, a ga-echekwa kuki ọzọ na ihe nchọgharị gị. Kuki a enweghị data nke onwe ya ma gosipụta ID ID naanị ị deziri. Agbanwe ya ga - agwụ mgbe ụbọchị 1 gasịrị.
Inye ọdịnaya site na saịtị ndị ọzọ
Nkọwa okwu: Ozi na saịtị a nwere ike ịnwe ọdịnaya agbakwunyere (dịka ọmụmaatụ, video, foto, isiokwu, wdg). Inye ọdịnaya sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ na-akpa àgwà n'otu ụzọ ahụ dịka ma ọ bụrụ na onye ọbịa gara na saịtị ọzọ.
Ebe nrụọrụ weebụ a nwere ike ịnakọta data gbasara gị, jiri kuki, tinye nchikota nke atọ, ma soro mmekọrịta gị na ọdịnaya a agbakwunyere, gụnyere nsuso mmekọrịta yana ọdịnaya nwere agbakwunyere ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ma banye na weebụsaịtị.
Na mpaghara nke a, ị ga-egosipụta nchịkọta nchịkọta nke ị na-eji, otú ndị ọrụ nwere ike isi pụọ na nsuso, na ị ga-enyekwa njikọ na ozi nzuzo ahụ nke onye na-ahụ maka ọrụ nyocha gị nyere.
Site na ndabara, WordPress anaghị anakọta data ọ bụla nyocha. Otú ọ dị, ọtụtụ akaụntụ nnabata na-anakọta data amaghị. Ị nwekwara ike ịwụnye ngwa mgbakwunye WordPress nke nyere ọrụ nyocha. Na nke a, gbakwunye ozi site na ngwa mgbakwunye ebe a.
N'akụkụ a, ị kwesịrị ịnye aha na ndepụta nke ndị ọzọ na-enye gị ndị ị na-ekerịta data weebụ, tinyere ndị mmekọ, ọrụ ígwé ojii, ụzọ nkwụnye ụgwọ, na ndị na-eweta ọrụ nke atọ, ma gosi ihe data ị na-ekere òkè na ha na ihe mere. Ọ bụrụ na o kwere omume, biko nye njikọ na iwu nke onwe ha.
Na ndabara, WordPress anaghị enye onye ọ bụla ozi nkeonwe.
N'akụkụ a, ị ga-akọwa oge ole ị na-echekwa data nkeonwe anakọtara ma ọ bụ kwadoro site na saịtị a. Ọ bụ ezie na ịchọrọ ka ị nwee usoro, yana ihe gbasara oge ole ị na-echekwa dataset ọ bụla na ihe mere ị ji edebe ya, a gaghị edeba ozi a ebe a. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọpụta na ị na-edekọ akwụkwọ ndekọ gị maka ọnwa isii, data nyocha maka otu afọ, na ihe ndị zụrụ ahịa maka afọ iri.
Nkọwa okwu: Ọ bụrụ na ị gbakwunye okwu, a ga-edebe okwu na metadata ruo mgbe ebighị ebi. A na-echekwa data ahụ maka nzube nke ịchọpụta ma kwado ihe niile na-esonụ mgbe ị na-achọpụtaghị kama ịkwado ha n'ọdụ ụgbọ mmiri na-edozi.
Maka ndị ọrụ na abanye na saịtị a (ọ bụrụ na ha nwere nhọrọ a), anyị na-echekwara ozi nkeonwe ha na-enye na profaịlụ ọrụ ha. Ndị ọrụ niile nwere ike ịhụ, dezie, ma ọ bụ hichapụ ozi gbasara ha n'oge ọ bụla (ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịgbanwe aha njirimara ha). Webmasters nwekwara ike ịlele ma dezie ozi a.
Kedu ihe bụ ikike gị?
N'akụkụ a, ị ga-akọwa ihe ndị ọrụ ikikere nwere banyere data ha na otu ha nwere ike ịrịọ ha.
Nkọwa okwu: Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na saịtị a ma ọ bụ nwere ihe agbakwunyere na ebe a, ị nwere ike ịrịọ faịlụ na mbubata data onwe onye anyị nwere banyere gị, gụnyere ozi niile ị nyere anyị. I nwekwara ike ịrịọ maka iwepụ data nkeonwe anyị nwere gbasara gị. Nhọrọ a anaghị agụnye data anyị chọrọ ka anyị debe maka nhazi, iwu ma ọ bụ ihe nchebe.
Ebee ka ị na-eziga data gị?
Akụkụ a ga-edekọ ihe niile na-enyefe data gbasara saịtị gị na-abụghị European Union na kọwaa otú data ndị European na-echekwa data ndị a. Akụkụ a nwere ike ịgụnye ntanetị weebụ gị, nchekwa igwe ojii, ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ nke atọ.
European data nchedo iwu chọrọ ka ozi banyere European bi na-agafere n'èzí European Union na-echebe site otu iwu na iwu ka ọ bụrụ na data ndị ahụ dabeere na na Europe. Ya mere, na mgbakwunye na-etinye ebe data, ị ga-akọwa otú ị hụ na a ụkpụrụ na-zutere, ma site gị ma ọ bụ ndị ọzọ, n'agbanyeghị ma nkwekọrịta dị otú ahụ dị ka nke onye nchedo nkebi ahịrịokwu nke nlereanya contracts ma ọ bụ nkịtị ụlọọrụ iwu .
Nkọwa okwu: Enwere ike ịchọta ihe ndị ọbịa si na ọrụ nyocha nke spam nwere ike ịchọta na mba ọzọ.
N'akụkụ a, ị ga-enye usoro ọnụọgụ maka nchedo nzuzo. Ọ bụrụ na achọrọ ka ị nwee onye ọrụ gị, biko nyekwa aha ha na nkọwa kọntaktị zuru ezu.
Ọ bụrụ na ị na-eji weebụsaịtị maka nzube azụmahịa ma na-etinye aka na nchịkọta mgbagwoju ma ọ bụ nhazi nke ozi nkeonwe, ị ga-enyekwa ozi ndị na-esonụ n'ime iwu gị.
Otu esi echebe ozi nkeonwe gị
N'akụkụ a, ị ga-akọwa ihe ịmere iji kpuchie data njirimara. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịnye ozi gbasara ọrụaka, dị ka: nzuzo; nchedo dịka nkwenye dị iche iche; na ihe ndị ọzọ dịka nyocha ọrụ na mpaghara nchedo onwe onye. Ọ bụrụ na ị mere nyocha njedebe nzuzo, ị nwekwara ike ịkọ ya.
Kedu usoro ị ga-esi wepụ ihe ọmụma?
N'akụkụ a, ị ga-akọwa ihe usoro dị iche iche iji dozie nchịkwa data, ma ọ bụ ikike ma ọ bụ ihe dị adị, dị ka usoro nchịkwa n'ime ụlọ, usoro mmekọrịta, ma ọ bụ ngọzi bara uru.
Kedu ndị nke atọ anyị na-anakọta data nkeonwe?
Ọ bụrụ na saịtị gị nwetara data njirimara ndị ọzọ, tinyere ndị mgbasaa ozi, a ghaghị itinye ozi a na ngalaba nke ozi nzuzo gị nke na-emekọ ozi nke ndị ọzọ.
Kedu mkpebi anyị na-eme na / ma ọ bụ gosipụta data onye ọrụ
Ọ bụrụ na gị na-enye ọrụ na-agụnye akpaghị aka mkpebi - n'ihi na ihe atụ, ikwe ahịa na-etinye maka n'aka ma ọ bụ na-anakọta data ka mgbasa ozi na profaịlụ - i nwere na-etinye ndị a Filiks, na-agụnye ozi na otú a na-eji ozi, ihe mere ka mkpebi ndị a aggregated data na ihe ikike ha nwere ọrụ nke mkpebi na-enweghị mmadụ aka.
Ọrụ nke ozi nke ụlọ ọrụ iwu
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nọ n'okpuru iwu nzuzo ndị ọzọ, enwere ike ịjụ gị ịnye ozi dị mkpa.
Nzuzo maka PetrPikora.com
Ọ bụrụ na ị achọ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ nwere ajụjụ ọ bụla banyere anyị na iwu nzuzo, biko chere free ịkpọtụrụ anyị site na email na Nzuzo.
Na www.PetrPikora.com anyị tụlee nzuzo nke anyị na ndị ọbịa na-nnọọ mkpa. Nke a na iwu nzuzo akwụkwọ nkọwa zuru ezu banyere Types of Personal Information na-anakọtara na Kọrọ site www.PetrPikora.com na otú anyị na-eji ya.
Dị ka ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ, www.PetrPikora.com na - eji faịlụ ndekọ. Njikwa ndị a na-edeba ndị ọbịa na saịtị ahụ - na-abụkarị ụkpụrụ usoro maka ụlọ ọrụ ntanetị na akụkụ nke nchịkọta ọrụ nchịkọta. Ihe ọmụma n'ime faịlụ ndekọ gụnyere internet protocol (IP) adreesị, ụdị ihe nchọgharị, Onye Ntanetị Ọrụ Ịntanetị (ISP), stampụ ụbọchị / oge, na-ezo aka / wepụ peeji nke, na ikekwe ọnụ ọgụgụ clicks. A na-eji ozi a iji nyochaa ọnọdụ, nyefee saịtị ahụ, usoro nlekọta onye ọrụ na saịtị ahụ, na ikpokọta ozi igwe mmadụ. Adreesị IP, na ozi ndị ọzọ dị otú ahụ adịghị ejikọta na ozi ọ bụla nke a na-amata n'onwe ya.
www.PetrPikora.com na-eji kuki iji chekwaa ozi gbasara mmasị ndị ọbịa, iji dekọọ ozi ndị akọwapụtara onye ọrụ na peeji nke ibe onye nleta na-enweta ma ọ bụ na-eleta, ma hazie ma ọ bụ hazie ọdịnaya weebụ anyị dabere na ụdị nchọgharị nke ndị ọbịa ma ọ bụ ozi ndị ọzọ onye nleta na-eziga site na nyocha ha.
→ Google, dị ka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji mee mgbasa ozi na www.PetrPikora.com.
→ Ntugharị Google nke kuki DART na-enyere ya aka ịkwado mgbasa ozi na ndị ọbịa anyị na saịtị site na nleta ha na www.PetrPikora.com na saịtị ndị ọzọ na Intaneti.
→ Ndị ọrụ nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na mgbasa ozi nzuzo na netwọk Google na URL na - esonụ - http://www.google.com/privacy_ads.html
Mmekọ mgbasa ozi anyị
Ụfọdụ ndị mmekọ mgbasa ozi anyị nwere ike iji kuki na mgbama weebụ na saịtị anyị. Ndị mmekọ mgbasa ozi anyị gụnyere ....
Mgbe ọ bụla n'ime ndị mmekọ mgbasa ozi nwere onwe ha Nzuzo maka ha site, emelitere na hyperlinked akụ na-nọgidere na-enwe ebe a: nzuzo atumatu.
Ka ị na-ajụ a ndepụta chọta iwu nzuzo ọ bụla na loop nke mmekọ mgbasa ozi nke www.PetrPikora.com.
www.PetrPikora.com enweghị ohere ma ọ bụ na-achịkwa kuki ndị a na-eji-atọ ndị ọzọ-akpọsa ngwá ahịa.
Nke atọ Party nzuzo atumatu
Ị ga-enyocha nkwupụta nzuzo dị iche iche nke ndị ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ a maka nkọwa zuru ezu banyere omume ha nakwa maka ntụziaka banyere otu esi apụ na ụfọdụ omume. Usoro iwu nzuzo nke www.PetrPikora.com adịghị emetụta, anyị enweghị ike ịchịkwa ọrụ nke, ndị ọzọ na-akpọsa ma ọ bụ saịtị weebụ. Ị nwere ike ịchọta ndepụta zuru oke nke atumatu nzuzo ndị a na njikọ ha ebe a: Amụma nzuzo Links.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ kuki, ị nwere ike ime nke a site na nhọrọ nyocha ọ bụla. Enwere ike ịchọta ihe ọmụma zuru ezu banyere njikwa kuki na ihe nchọgharị weebụ dị na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche. Gịnị Bụ Cookies?
Anyị kwenyere na ọ dị mkpa inye nchekwa maka ụmụaka online. Anyị na-agba ndị nne na nna na ndị nlekọta ume ka ha na ụmụ ha nọrọ oge n'ịntanetị iji hụ, soro na / ma ọ bụ nyocha ma duzie ha n'ịntanetị. www.PetrPikora.com anaghị achọpụta ihe ọmụma ọ bụla n'onwe ya site na ụmụaka n'okpuru afọ 13. Ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta kwenyere na www.PetrPikora.com nwere ihe ọmụma gbasara onye nwatakịrị n'okpuru afọ 13, biko kpọtụrụ anyị ozugbo (iji kọntaktị na paragraf mbụ) anyị ga-eji mgbalị kachasị mma anyị iji kpochapụ ozi dị otú ahụ na ndekọ anyị ngwa ngwa.
Online Amụma nzuzo naanị
A Amụma nzuzo na-emetụta nanị anyị online Ihe na bụ irè n'ihi na ndị ọbịa ka anyị website ma na-akọrọ Banyere ọmụma na / ma ọ Anakọtara n'ebe ahụ. A iwu na-adịghị emetụta ozi ọ bụla Anakọtara offline ma ọ bụ site na Channels karia nke a website.
Site na iji website, ị na ugbu nkwenye anyị iwu nzuzo na-ekweta na usoro nke ITS.
Nzuzo Nzuzo a ka emelitere na: Sunday, August 27th, 2017.
Anyị kwesịrị imelite, dozie ma ọ bụ mee ka ọ bụla mgbanwe anyị iwu nzuzo, Ndị mgbanwe ga-gwa ebe a.
Ụdị asụsụ a na-agụnye isi ihe nke data onwe gị na ụlọ ahịa gị nwere ike ịnakọta, ịchekwa na ịkekọrịta, yana onye nwere ike ịnweta data ahụ. Dabere na ntọala ndị enyere na nke a na-ejikwa plugins ndị ọzọ, ozi a kapịrị ọnụ nke ụlọ ahịa gị na-akọrọ ga-adị iche. Anyị na-akwado ịkọrọ onye ọka iwu mgbe ị na-ekpebi ihe ọmụma iji kpughere iwu nzuzo gị.
Anyị na-anakọta ozi gbasara gị n'oge usoro ndenye ego na ụlọ ahịa anyị.
Anyị ga-ejikwa kuki iji na-edekọ ihe dị na ụgbọ ibu gị mgbe ị na-eme nchọgharị na saịtị anyị.
Rịba ama: Ị nwere ike ịchọrọ ịmatakwu usoro iwu kuki gị ma jikọta mpaghara ahụ site na ebe a.
Anyị na-echekwa gbasara gị mgbe niile ma ọ bụrụhaala na anyị chọrọ ozi maka nzube nke anyị na-anakọta ma jiri ya, anyị achọghị ka iwu mee ka anyị nọgide na-edebe ya. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-echekwa ozi iwu maka afọ XXX maka ụtụ isi na ịme akaụntụ. Nke a gụnyere aha gị, adreesị ozi-e na ịgba ụgwọ na adreesị mbupu.
N'akụkụ a, ị ga-edepụta onye ị na-ekerịta data, na maka ebumnuche. Nke a nwere ike ịgụnye, ma ọ bụghị njedebe na, nchịkọta, ahịa, ụzọ ịkwụ ụgwọ, ndị na-ebufe ahịa, na nke ndị ọzọ na-agbado.
Anyị na-ekerịta ozi na ndị ọzọ na-enyere anyị aka nye anyị iwu na ọrụ ụlọ ahịa gị; ọmụmaatụ -
Na mpaghara nke a, ị ga-edepụta ndị nhazi nke ịkwụ ụgwọ nke atọ ndị ị na-eji na-akwụ ụgwọ na ụlọ ahịa gị ebe ọ bụ na ha nwere ike ijikwa data ndị ahịa. Anyị etinyela PayPal dị ka ihe atụ, mana ị ga-ewepụ nke a ma ọ bụrụ na ịnweghị iji PayPal.
Site n'iji ndọtị a, ị nwere ike ịchekwa data nkeonwe ma ọ bụ ịkekọrịta data na ọrụ mpụga. Mụtakwuo banyere otu a si arụ ọrụ, tinyere ihe ịchọrọ ịsonye na iwu nzuzo gị.
Isi Iyi: Mgbanwe Mgbanwe
Ọ bụrụ na ị na-eji Google Web Fonts (ndabara) ma ọ bụ na-egwu vidio ma ọ bụ ụda site na YouTube ma ọ bụ Vimeo na Mgbanwe Mgbanwe, anyị nwere ike ikwu na ị gbakwunye ndị uweojii nzuzo gị ederede okwu:
Ụlọ ọrụ anyị na-eji njirimara ndị Vimeo nyere video ọnụ ụzọ. Ọrụ a bụ Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Ọ bụrụ na ị gaa n'otu n'ime ibe anyị ndị na-egosi ihe mgbakwunye Vimeo, a na-ejikọta njikọ na Vimeo sava. N'ebe a, a na-agwa ihe nkesa Vimeo banyere nke ibe anyị ị gara. Na mgbakwunye, Vimeo ga-enweta adreesị IP gị. Nke a na-emetụta ma ọ bụrụ na ịbanyeghị na Vimeo mgbe ị gara na ngwa mgbakwunye ma ọ bụ enweghị akaụntụ Vimeo. A na-ebute ozi ahụ na sava Vimeo na US, ebe a na-echekwa ya.
Maka nke a, ihe nchọgharị gị ga - eme ka njikọ dị na sava Google. Google si otú a mara na e webatara ibe weebụ anyị site na adreesị IP gị. A na-eji mkpokọta Gọọmenti Google eme ihe maka mmasị nke ihe ngosi na ngwa mma nke ngwa mgbakwunye anyị. Nke a bu ihe bara uru n'onodu Art. 6 (1) (f) DSGVO.
On anyị peeji nke, plugins nke na-elekọta mmadụ na netwọk SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK) Ka ike ike. The SoundCloud plugins nwere ike ghọtara site SoundCloud logo na anyị na saịtị.
Mgbe ị gara na saịtị anyị, njikọ dị n'etiti ihe nchọgharị gị na sava SoundCloud guzobere site na ngwa mgbakwunye. Nke a na-enye SoundCloud ohere ịnata ozi ị gara na saịtị anyị site na adreesị IP gị. Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ "Dị ka" ma ọ bụ "Share" mgbe ịbanye n'ime akaụntụ SoundCloud gị, ị nwere ike jikọta ọdịnaya nke ibe anyị na profaịlụ SoundCloud gị. Nke a pụtara na SoundCloud nwere ike ijikọta na ibe anyị na akaụntụ njirimara gị. Anyị ga-achọ ịkọwapụta na, dịka onye na-eweta ibe ndị a, anyị enweghị ihe ọmụma banyere ọdịnaya nke data transmitted ma ọ bụ otú SoundCloud ga-eji ya. Maka ama ọzọ gbasara iwu nzuzo SoundCloud, biko gaa na https://soundcloud.com/pages/de nzuzo.
Ọ bụrụ na ịchọghị SoundCloud iji soro gị gaa na saịtị anyị na akaụntụ SoundCloud gị, biko banye na akaụntụ SoundCloud gị.